UNWTO inoronga 1st Global Youth Tourism Summit muItaly
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » UNWTO inoronga 1st Global Youth Tourism Summit muItaly
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kugadzikana, kugovana zviitiko uye chiono chavo cheramangwana rekushanya - vana vane makore gumi nemasere kusvika gumi nemasere vanofunga sei? "Global Youth Tourism Summit" ichagamuchira boka rakasarudzwa revana vanobva pasirese kuti vatsvage mhinduro.
1st Global Youth Tourism Summit ichave yekutanga yerudzi urwu pasirese pasirese.
Musangano uyu wakarongwa nesangano reWorld Tourism Organisation (UNWTO), rakabatana neMinistry of Tourism Italy neItaly National Tourism Board.
UNWTO inobatana nevamwe vese vemhuri yeUN mukushingairira kuziva kwakakosha kwevechidiki mukuenderera mberi kwekusimudzira nzanga.
Yekutanga Global Yevechidiki Tourism Summit (1-23 ​​Nyamavhuvhu 25, Sorrento, Italy) ichave yekutanga yerudzi urwu pasirese pasirese, ichibvumira vatori vechikamu vechidiki kuve chikamu chechiitiko chakasarudzika, nechinangwa chekusimudzira kuita kwevadiki mubazi rezvekushanya uye ipa simba zvizvarwa zvidiki mukutyaira nyika inoenderera.
Musangano uyu wakarongedzwa ne World Tourism Sangano (UNWTO), mukubatana ne Ministry of Tourism Italy neItaly National Tourism Board, uye yakaiswa nehurumende yeItaly muchimiro chehutungamiriri hwayo hweG20 gore rino.
Nechiitiko ichi, UNWTO inobatana nevamwe vese vemhuri yeUN mukushingairira kuziva zvakakosha mupiro wevechidiki mukuenderera mberi kwekusimudzira nzanga.
"Vana nevechidiki havasi vatungamiriri vedu venguva yemberi chete, asi vanokosha vanoshanda vezvino, uye tinogona kuvapa simba nekuvabatanidza kutanga nhasi", anodaro UNWTO Secretary General, Zurab Pololikashvili. "Sevatungamiriri vemangwana, zvakakosha kuti vechidiki vabatanidzwe mukuumba uye chiratidzo chepasi rose cheramangwana", akawedzera.
Kuburikidza nemuenzaniso UNWTO General Assembly, vatori vechikamu vachatora yavo yekuzivisa pane ramangwana rekushanya. Gwaro iri richaunzwa pachikamu che24th cheUNWTO General Assembly (12-15 Gumiguru 2021, Marrakesh, Morocco).
Chiitiko ichi chinosanganisira huwandu hwezviitiko zvekudyidzana uye zvakare zvinosanganisira kutungamira hunhu hwepasirese kuti vagoverane zvavakaona mukutenderera kwekushanya nenzvimbo dzakaita semitambo, mimhanzi, gastronomy, uye indasitiri yemafirimu.